Kumenywa amaciko | News24
INHLANGANO yamaciko asoGwini ebizwa ngeCreative and Cultural industry Federation of South Africa CCIFSA eholwa nguMnu Siyakudunisa Sotsu izobe ibambe umhlangano nenhlangano yosomabhizinisi iUgu Association of Businesses namhlanje.
Lomhlangano kuzobe kuhloswe ngawo ukuhlomisa amaciko ngendlela okumele anakekele ngayo amabizinisi awo kanye nokuwahlomisa ngezindlela okumele azilandele ekuqinisekiseni ukuthi umsebenzi wobuciko uba sezindgeni elihle ngokwebhizinisi.
Lomhlangano uzobe ubanjelwe eMargate Art Museum Active room ngehora le-12 emini. Kumeywa onke amaciko ukuba abe ingxenye yalomhlangano ozobahlomisa nangezindlela zokuthola uxhaso kuhulumeni kanye nakwezinye izinhlaka.
Ngeminye imininingwane kungaxhunywana noSotsu enombolweni ethi 078 212 6058 noma nge-email siyasotsu@gmail.com - Luthunyelwe.